Styling Tips | Ariel’s Style – 𝐀𝐫𝐢𝐞𝐥'𝐬 𝐒𝐭𝐲𝐥𝐞
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါရှင် Ariel’s Style ကနေ ဝေမျှပေးနေကြ Styling Tips လေးတွေ ကိုဒီအပတ်မှာတော့ တင်နေကြမဟုတ်တဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Ariel’s Style ရဲ့ Styling Tips တွေက လုံးဝ General မဆန်ပဲ Professional Point Of view ကပဲပေးတယ်ဆိုတာ အားလုံး သိထားပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပုံမှန်ဆိုရင် Ariel’s Style က Styling Tips ပေးတဲ့ နေရာမှာ Body Type တစ်ခုတည်းအတွက်ပဲပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Vice Versa အနေနဲ့ အင်္ကျီတစ်ထည်တည်းကို ဗဟိုပြုပြီး ပြောပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Dress တစ်ထည်တည်းကို ဘယ်လို Body Type တွေအတွက် ဘယ်လို Accessories တွေနဲ့တွဲပြီး ဘယ်လို Proportion ချပြီး ဝတ်ရမလဲဆိုတာ ကိုပြောပြပေးသွားမှာပါ။ စိတ်ဝင်စားရင် အဆုံးထိဖတ်ကြည့်နော် အောက်ကပုံထဲမှာပြထား တဲ့ Peach Color Dress လေးက တော့ Nichii Myanmar က ပဲဖြစ်ပါတယ်။
A Line Dress Type ဖြစ်ပြီးတော့ Dress ရဲ့ တစ်ဖက်ခြမ်းက Plain ဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ တစ်ခြမ်းကတော့ Pleated လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Neck line အနေနဲ့ကလည်း Collar ပါပေမဲ့ V neck ဖြစ်နေတာက Body Type အတော်များများနဲ့ အဆင်ပြေစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ အောက်က ပုံထဲမှာ Dress လေးကို ဝတ်ထားတဲ့ Ma Ariel Thi ကတော့ Inverted Triangle Body Shape ပိုင်ရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပခုံးကျယ်သူဖြစ်သော်ငြားလည်း A Line Dress Type ရယ် V neck ရယ်ကြောင့် လည်ဆွဲအရှည်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ သူမရဲ့ Body ကို အချိုးကျသွားစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Dress လေးရဲ့ အားသာချက် နောက်တစ်ခုကတော့ ခါးစည်းကြိုးလေးပါပဲ။ အပေါ်အောက် frame ညီတဲ့ Normal Body Shape (Rectangle) ပိုင်ရှင်တွေ အတွက် ခါး စည်းကြိုးလေးပါတာကြောင့် ဝတ်လို့ရနေပြန်ပါတယ်။ နားကပ်သေးသေးလေး နဲ့ ဖိနပ်အရောင်တူလေး ကို သာဆင်မြန်းလိုက်ရင် Perfect ပါပဲ။ ကဲဒါဖြင့် Pear Shape တွေအတွက်ရော ?? Of course ရနေပြန်ရော။ နားကပ်ကြီးကြီးလေးနဲ့ Shoulder Bag လေးတော့ ပါပစေနော် Hourglass Type တွေအတွက်ကတော့ ဘာပြောစရာလိုသေးလဲနော်။ ဖိနပ်အဖြူလေးနဲ့ Shoulder Bag အဖြူလေး သာတွဲကိုင်လိုက်ရင် So Awesome ပဲပေါ့ မြင်ယောင်ကြည့်တာနဲ့တင် ဒီလောက်လှနေတဲ့ ဒီ Style လေးကို Classic Chic Style လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Around 20 တွေ တင်မကဘူး Ma Ariel Thi တို့လို Middle Age တွေအတွက်ပါကြည့်ကောင်းနေတာပေါ့ ကဲ လူတိုက်းနီးပါးနဲ့ အဆင်ပြေစေတဲ့ ဒီ Dress လေးကို ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Nichii Myanmar မှာ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ New Collection လေးမို့လို့ သူများ မဝတ်ခင်အရင်ဝတ်ရအောင် Fashionista လေးတို့ အမြန်ဆုံး ဝယ်ထားလိုက်တော့နော် Bye Bye!
Tags: Fashion and style, Fashion Look book, Fashion Style, fashionable outfits, FashionLook-book, FashionStyle, FashionStyling, FashionTips, Thi&FashionAlliance, thifashionalliances
Previous Balenciaga Fall 2021 Collection
Next “The Dancing Kid” Celine Homme’s SS/21 Menswear Collection